LA LIGA: Kooxda Barcelona oo garoonkeeda Camp Nou ku xasuuqday Deportivo Alaves kulan Suarez uu ku lug lahaa afar gool… + SAWIRRO – Gool FM
LA LIGA: Kooxda Barcelona oo garoonkeeda Camp Nou ku xasuuqday Deportivo Alaves kulan Suarez uu ku lug lahaa afar gool… + SAWIRRO
Haaruun December 21, 2019
(Barcelona) 21 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou ku xasuuqday caawa naadiga Deportivo Alaves kulankan oo ka tirsanaa horyaalka La Liga, waxaana ay ku adkaatay 4-1.
Luis Suarez ayaa kulankan afarta gool oo ay dhalisay kooxdiisa Barca ku lug lahaa, isagoo saddex gool caawiyey mid kalena dhaliyey.
Daqiiqadii 14’aad ee bilowgii ciyaarta Antoine Griezmann ayaa goolka furitaanka ciyaarta u dhaliyey kooxdiisa Barcelona kaddib caawin uu ka helay Luis Suarez.
Markale kubbad uu caawinteeda lahaa Luis Suarez waxaa dhammaadkii qeybtii hore ee ciyaarta shabaqa gaarsiiyey Arturo Vidal, sidaas ayaana lagu kala nastay Barcelona oo ku hoggaminaysay ciyaarta 2-0.
Markdii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Alaves ayaa hal gool iska soo guday waxaana u dhaliyey 56’daqiiqo Pere Pons, laakiin goolkaasi guuldarro kama badbaadin kooxdiisa.
Daqiiqaddii 69’aad Lionel Messi ayaa shabaqa soo taabtay iyadoo Luis Suarez uu dhammaystiran saddexleydiisa caawin, waxaana kabtanka reer Argentina uu sidaas ku dhaliyey goolkiisii 50-aad ee sanadkan 2019, waana markii sagaalaad ee uu Leo dhalinayo 50 gool sanad gudihiis, kulanka ayaana sidaas ku noqday 3-1 ay ku gacan sarreysay kooxda martida loo ahaa ee Barca.
75’daqiiqo Luis Suarez ayaa gool ku laad ku soo xiray ciyaarta kaddib markii kubbad gacan ku dhacday lagu abaal-mariyey in Barca rigoore loo dhigo laacibka reer Uruguay ayaana gool u rogay taasoo ka dhigan inuu gool dhaliyey saddex kalena caawiyey.
Barcelona ayaa haatan hoggaanka u haysa horyaalka La Liga, waxaana Barcelona ay guul ku soo xiratay sanadkan 2019, iyadoo sanadkaan oo dhan aan Barca looga adkaan garoonkeeda Camp Nou.
Shaxda rasmiga ah ee kulanka Manchester City iyo Leicester City oo la shaaciyey… ( Yaa ku soo bilowday kulanka ka dhacaya Etihad?)
Tababare Solskjær oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Man United ee ka qeyb galaya kulanka Watford.. (Miyuu ku jiraa Pogba?)